TOMATO LORRAINE BEAUTY: SHARAXAAD KALA DUWAN, SAWIR, FARSAMOOYINKA BEERAHA - BEER CAGAARAN
Yaanyo asalka ah "quruxda Lorraine": sharaxaadda kala duwan, sawir
Tamaandhada waxay noqon kartaa oo keliya wareegsan ama ovalaha. Waxaa ka mid ah kala duwan ee kala duwan waxaa jira xulashooyin leh miraha foomka of konton, silsiladaha iyo tirooyin kale. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa yaanyo yaryar.
Wakiil caan ah oo ka mid ah kooxdani waa Lorraine Beauty kala duwan. Miraha oo u eg chrysanthemums qalafsan doonaa qurxin miiska kasta.
Akhriso qodobbada sharaxaad faahfaahsan ee kala duwan, iyo sidoo kale dhammaanba ku saabsan sifooyinka iyo astaamaha beerashada, iska caabinta cudurada.
Tamaandho Lorraine Beauty: sharaxaadda kala duwan
Magaca dugsiga Quruxda Lorraine
Sharaxaad guud Fasalada dhexe iyo xilli-ciyaareedka ee aan caddayn
Bisaylka 110-120 maalmood
Foomka Fadhiga ayaa ku wareegsan
Cunto dhexdhexaad ah ilaa 500 garaam
Noocyo dhaadheer 5-7 kg ka baadiyaha
Cadaadiska cudurada Dareemaha Virus-ka
Tomato quruxda Lorraine - noocyo dhif ah, caan ah taageerayaasha miro aan caadi ahayn. Burburin baadiyaha, waxay gaartaa dhererka 1.5 m, shaybaarrada shakhsi ahaan kora ilaa 2 m.
Kala duwanaanshuhu waa xilli-dhexaad, berriga furan wuxuu u dhaqmaa sidii hore-Bisaylkiisa.
Yield waa celcelis; 10-15 yaanyo lagu soo saaro baadiyaha. Fruiting wuxuu bilaabmaa July wuxuuna sii socdaa ilaa Sebtembar.
Miro ayaa ku wareegsan, oo ballaadhan, oo culeyskiisu yahay 500 g, qaabkuna waa caleen, dhirta, qaybta yaanyo waxay u egtahay ubax. Midabku waa casaan casri ah, oo buuxa. Dhadhamin waa wax fiican, macaan. Qaar badan oo qolal qarsoon oo madhan waxay siiyaan miro muuqaal qurux badan, laakiin waxay ka dhigtaa iyaga oo aan casiir lahayn.
Dhadhanka midhaha waxay ku xiran tahay xaaladaha sii kordhaya, cimilada kulul, yaanyada badani macaan yihiin. Waa hagaagaa, la goostay marxaladda yaanyada farsamooyinka farsameedka si fiican ugu raraan guriga.
Miisaanka miro kala duwan ayaa la barbar dhigi karaa dadka kale miiska:
Lorraine Beauty ilaa 500 garaam
Hooyo badan 200-400 garaam
Banana Orange 100 garaam
Honey badbaadiyey 200-600 garaam
Pound Rosemary Pound 400-500 garaam
Persimmon 350-400 garaam
Dimuquraad la'aan ilaa 100 garaam
F1 jecel 115-140 garaam
Flamingo Pink 150-450 garaam
Mooro madow 50 garaam
Jacaylka hore 85-95 garaam
Sidoo kale akhri websaydkayaga: Waa maxay yaanyo dabaylo goor dambe ah iyo sidee tallaabooyinka looga hortago waa mid wax ku ool ah? Waa maxay noocyadu u adkeysan karaan cudurkan?
Waa maxay cudurada inta badan ay soo gaarto yaanyada lagu koriyo iyo sidee loo xakameyn karaa? Maxay yihiin noocyada yaanyada ma aha cudurro waaweyn?
Asal iyo Ujeeddo
Darajada waxaa laga saaraa Maraykanka, oo loogu talagalay beerista dhulka dhulka ama lagu koriyo. In lagu koriyo oo kulul, fruiting bilaabmaa July, ee dhulka u furan, miraha ugu horeysay u muuqdaan August. Waxyaabaha kala duwan waxay jecel yihiin heerkul sare iyo qoyaan dhexdhexaad ah.
Tamaandho Lorraine Beauty marar badan ayaa la isticmaalay. Muuqaal cajiib ah oo la jarayo waxay ka dhigeysaa mid aan lagama maarmaan u ah xeedhooyinka khudradda, maqaarka, barkadaha. Waxaa laga yaabaa in la kariyo. Maaha mid ku habboon cagaarka.
Hoos ka eeg: Tamaandho Lorraine Beauty photo
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kala duwan ee Lorraine Beauty:
muuqaal aad u qurux badan oo miro ah;
dhadhanka macaan ee macaan;
maahan daaq dheer oo si fudud loogu xiro;
iska caabida cudurada viral.
Iyadoo dhalidda ee noocyo kala duwan waxaa laga heli karaa miiska:
Lorraine Beauty 5-7 kg ka baadiyaha
Bobcat 4-6 kg duurka
Tufaaxa barafka 2.5 kg barkad
Cabbirka Ruushka 7-8 kg mitir labajibbaaran
Apple Russia 3-5 kg ​​baadiyaha
Boqorka boqorrada 5 kg baadiyaha
Katya 15 kg mitir labajibbaaran
Goolhayaha dheer 4-6 kg duurka
Jalandha qajaje 18 kg halkii mitir labajibbaaran
Hadiyad awoowe 6 kg mitir labajibbaaran
Crystal 9.5-12 kg mitir labajibbaaran
Waxaa ka mid ah cilladaha la xusay:
raaxo la'aanta, "banaan";
dhulka banaan ee dhalidda qaboobaha ayaa si weyn loo yareeyey;
haddii ay dhacdo heerkul aan fiicnayn, dhammaan ugxan-yariintu waxay leeyihiin waqti ay ku hormaraan miraha.
Seeds lagu beeray geedo horraantii Maarso. Abuurka waxaa lagu beeray qoto dheer oo ku saabsan 1 cm, heerkulka ugu fiican ee biqilka waa 25-26 digrii.
Goobtu waa thermophilic, waxaa ka wanaagsan inaad koraan filimka hoostiisa oo isticmaal nalalka iftiinka dheeriga ah. Wuxuu u baahan yahay dhar caadi ah oo leh xal aqueous ah Bacriminta macdanta.
Suurtogal maaha in lagu xadido waxyaabo badan oo ka mid ah nitrogen-ku jira, waa in doorbid la siiyo bacrimin-ka kooban Bacriminta.
Waxaa jira tiro badan oo siyaabo badan oo ay u koraan geedo yaanyo. Waxaan kuu soo bandhigi doonaa dhowr arrimood oo ku saabsan sida loo sameeyo tan:
waxbo aan lahayn
Soo degitaanka aqalka dhirta lagu koriyo waxay ku dhacdaa badhtamaha May. Xaraashyada waxaa lagu meeleeyaa fogaan ah 40-50 cm iyo meel u dhaxaysa safafka 60 cm Dhowr maalmood ka dib marka la isu tallaalayo, dhirta ayaa u baahan in la xiro si ay u taageeraan.
Waxay ku haboon yihiin shabakado wareegsan ama meel adag oo leh miro culus. Pasynkovaya looga baahan yahay ka saarida caleemaha dhinaca dambe. Si loogu guuleysto horumarinta ugxan-yari, waxaa lagu talinayaa in laga saaro caleemaha hoose..
Isbeddel Tomato Lorraine Beauty waa ku filan Fayruska u adkaysta (masaakiic, fusarium wilt). Si kastaba ha ahaatee, duurka ayaa saameeyn kara cawl, caleemo cad ama rooti.
In dagaalka, ciidda hordhac ah oo daadin leh xal of kiriimka kiriimka ama copper sulfate, loosening joogto ah iyo mulching u dhexeeya saf oo peat ama caws buu ka caawiyaa.
Tamaandhada soo jiidata cayayaanka in dhuftay caleemaha iyo xididdada: aphids, whitefly, thrips. Goobta furan, slugs, Baalallay, iyo walxaha Colorado waxay weerari karaan dhirta.
Wixii horukac ah, geedo yaryar ayaa lagu beeray karaa midka yaanyada, tusaale ahaan, caleemaha garbaha ama dhir. Ku xoqidda xal dareeraha ah oo ammaaka ah ayaa caawinaya in la burburiyo cayayaanka. Isticmaal sunta cayayaanka ka dib bilawga ubaxa waa wax aan macquul ahayn.
Tamaandhada Lorraine Beauty - noocyo dhif ah oo aan caadi ahayn oo qiimo leh oo isku dayaya in ay koraan goobtaaga. Ma ahan mid aad u haboon oo ku saabsan shuruudaha xabsiga, waxaa muhiim ah in lala socdo waraabinta iyo heerkulka, iyo sidoo kale in dhirta laga ilaaliyo cayayaanka.
Ono-laba duurka ee lagu koriyo waa ku filan si ay ula yaabaan guriga leh yaanyada yaryar ee Chrysanthemum dhowr bilood.
Dhaqdhaqaaqa-dillaac Hore u bislaaday Xilliga dhexe
Bobcat Qeybta madow Golden Miracle Golden
Cabbirka Ruushka Farabadan qabow Abakansky casaan
Boqorka boqorrada Kostroma Grapevine Faransiis
Goolhayaha dheer Buian Bannaanka huruudka ah
Hadiyad awoowe Farabadan cas Titan
Mucjiso Podsinskoe Madaxweyne Goobta
Ribbedka Maraykanka Deganaha xagaaga Krasnobay